Tombanana hitombo hery ka mety ho lasa rivodoza izy ao anatin’ny 36 ora ho avy, hoy ny fampitam-baovaon’ny sampandraharaha mpamantatra ny mety ho toetry ny andro ny tolakandron’ny sabotsy 19 janoary teo. Nahazo anarana omaly tamin’ny 12 ora antoandro izy io. 15km/ora ny fandehany, arahina tafio-drivotra ka tafiditra tao anatin’ny sokajy « Tempete tropicale modérée » mitondra ny anarana « Desmond ». Mitondra rivodoza manodidina ny 95km/h izy io. Omaly tamin'ny 3 ora tolakandro dia tany amin'ny manodidina ny 500 km avaratra andrefan'i Toliara no nisy ny ivony. Raha ny tomban'ireo mpamantatra ny toetr'andro dia hiditra an-tanety ao Mozambika izy io afaka 48 ora eo, izany hoe mety rahampitso. Mila manaraka hatrany ny fivoaran'ny toetr'andro isika satria mbola mety hisy ny fiforonan'ny rivodoza hafa ao amin'ny lakandranon’i Mozambika. Mila mitandrina ireo mpampiasa ranomasina, indrindra ny any Atsimo Andrefana fa mety hahery ny ranomasina. Mbola manan-kery hatrany ny filazana amin’ny fahabetsahan'ny rotsak'orana (fanairana miloko mena) ho an'ny faritra SAVA, DIANA ary SOFIA. Loko mavo ho an'ny faritra Boeny, Betsiboka, Melaky, Analamanga, Bongolava.